MacBook Pro leh Apple Silicon M1 iyo nolol batari aan caadi ahayn | Waxaan ka socdaa mac
MacBook Pro oo leh Apple Silicon M1 iyo nolol batari aan caadi ahayn
Sidii la filayay Apple waxay maanta soo bandhigtay MacBook Pro cusub oo leh M1 Apple Silicon. A processor cusub ee kombiyuutar gebi ahaanba cusub. Bannaanka ma noqon karto, laakiin gudaha waxaan ku leenahay bahal dhab ah oo leh faahfaahin gaar ah. Murugo wanaagsan, maxaa Apple ku gaari karaa processor-keeda. Waxaan wajaheynaa kacaan run ah. Mar labaad, Maanta Hal shay oo dheeri ah ayaa macno leh.
Bahalka cusub ee Apple soo bandhigtay ayaa lagu eedeynayaa inuu awood u leeyahay inuu soo bandhigo Macs cusub oo xaasidnimo u noqon doona shirkado badan. Isticmaalayaasha Mac, waan ku faraxsanahay soo bandhigida maanta iyo mustaqbalka soo socda ee kuwan soo socda qeexitaanno la yaab leh oo aan hore u soo koobnay.
Macbook-ka cusub ee cusub wuxuu ku nool yahay magaciisii ​​ugu dambeeyay. Xitaa intaa ka sii badan oo leh processor-ka cusub ee Apple Silicon. Waqtigan xaadirka ah waxaan haynaa mid ka mid ah laptop-yada ugu awooda badan qaybtiisa halkaasoo ka sarreeysa, waxa ugu badan ee ina haleeyaa waa awoodeeda batari ee cajiibka ah.
MacBook-ka cusub ee loo yaqaan 'M1' waa wax yaab leh
Qalabka M1 ee Apple wuxuu siinayaa 13-inji MacBook Pro xawaare iyo awood ka baxsan wax kastoo aan qiyaasi karno. Iyadoo ilaa 2,8x waxqabadka CPU. Ilaa 5 jeer xawaaraha sawirada. Iyada oo leh mashiinka neerfaha ee horumarsan ee barashada mashiinka illaa 11 jeer dhakhso badan. Y ilaa 20 saacadood oo nolosha batteriga ah, taas oo ah rikoor ku saabsan Mac kasta.
MacBook-kan cusub wuxuu leeyahay 8-core processor oo micnaheedu yahay in qulqulka shaqada iyo culeyska shaqada culus la qaado iyada oo aan wax dhibaato ah la qabin oo sidii hore loo soo sheegay, iyadoo ilaa 2,8 jeer waxqabadka wax soo saarka oo ka dhakhso badan jiilkii hore.
Apple kamay labalabeyn inay u yeerto Laptop-ka xirfadleyda ugu dhaqsaha badan adduunka ee fuliya nooc kasta oo hawl ah. Mana aha wax la yaab leh, maxaa yeelay ma aha oo kaliya inay leedahay mid ka mid ah makiinadaha ugu dhakhsaha badan ee abid la arko. ayaa sidoo kale lagu daray ay 'makarafoonka tayada' studio soo diyaariyey oo ay ku cusbooneysiisay kamarada websaydhka iyada oo loo marayo kobcinta processor-ka muuqaalka muuqaalka.
Mashiinka cusub ayaa sidoo kale leh laba dekedood oo USB-C ah oo taageera USB 4 iyo Thunderbolt 4, kuwaas oo wuxuu u oggolaanayaa kombuyuutarka inuu soo saaro 6K Pro Display XDR xalka buuxa. Baasaboor dhab ah!
Waxaan ku dooran karnaa qaabkan cusub Apple Silicon, MacBook Pro oo leh M1 iyo 13 inji oo leh soo socda faahfaahinta:
Apple M1 chip oo leh 8-core CPU.
16-core Neuronal Engine
8GB xasuusta mideysan
Waxaan kala dooran karnaa inta udhaxeysa 256 GB ama 512 GB ee keydinta SSD
13-inch Retina bandhigay oo leh Tone True
Taabashada Bar iyo Taabashada Aqoonsiga
Laba Thunderbolt / USB 4 dekadood
20 saacadood oo nolosha batteriga ah
Farqiga wuxuu kujiraa sidaad u aragto, awooda xasuusta kaydinta. Haddii aan rabno inaan iibsanno 256GB-ka waxay nagu kacaysaa 1.449 euro iyo Waxaan haysan doonaa laga bilaabo Nofeembar 17. Xusuusnow haddii aad ku nooshahay Madrid, ikhtiyaarka kaliya ayaa noqon doona in lagugu soo diro internetka. Haddii aan doorano xusuusta ugu badan, taas oo ah, 512 GB, waa inaan bixinnaa 1.679 euro sidoo kalena waxaan diyaarin doonnaa laga bilaabo Nofeembar 17. Waxaan kala dooran karnaa labada terminaal meel cirro ama qalin.
Xusuusnow in 13-inch MacBook Pro oo leh processor Intel iyo 16 GB of RAM sidoo kale wali waa la heli karaa, qiimo ka sareeya kuwii hore. Laakiin runtii, waa maxay waxaan u maleyneynaa inaysan u qalmin hada in M1-da cajiibka ah uu inaga dhex jiro. Waxay noqon doontaa qalad in loo tago processor Intel ah iyada oo Apple horeyba noo dhex jirtay.
Waxaan dooneynaa inaan dhigno laakiin, taas oo had iyo jeer la dhigi karo. 8GB oo RAM ah kuma filna kartida buuxda ee kombiyuutarkan. Laakiin dulqaad yeelo, maxaa yeelay processor-ka cusub, way ka badan yihiin oo wuxuu ku qaban doonaa wax ka badan kan processor-ka Intel-ka ah wuxuuna labanlaabmi doonaa RAM-ka. Waa dareen, waa inaan aragnaa tijaabooyinka waxqabadka, laakiin warqad ahaan, way xaaqi doontaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » MacBook Pro » MacBook Pro oo leh Apple Silicon M1 iyo nolol batari aan caadi ahayn
Apple Silicon's MacBook Air wuxuu ku daraa kumbuyuutar cusub
Muhiimadda maanta waxaa iska leh Mac mini cusub oo wata mashiinka M1